Fududeynta saadaalinta fudud ee tirakoobka (Tiirka 473) - Rabbi Michael Avraham
Fududeynta saadaasha tira koobka fudud ee fudud ( tixda 473)
16 faallooyin	/ 07 Iyar 05 - 2022/XNUMX/XNUMX 07 / 05 / 2022
Qaadashada aad u dheer?
Dib u soo deji dukumeenti
Furo tab cusub
Soo deji [321.87 KB]
Soo deji [53.66 KB]
→ Qoraalkii hore
Qoraalka xiga ←
16 Fikradaha ku saabsan "fududeynta Saadaasha Tirakoobka Fudud (Tiirka 473)"
Z. Bayer 07 - 05/2022/23 saacada 14:XNUMX
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 saacada 07:XNUMX
Marka la eego dooda Bibi, dooddu waxay u malaynaysaa inay jirto hal ugu badnaan, marka ay suurtogal tahay (iyo xitaa suurtogal ah) inay jiraan dhowr kuwa soo jiidasho leh, sidaas darteed ugu yaraan ugu yaraan. Marka la eego waaqiciga dooddu faa'iido yar ma leh, waxa ay dooddu leedahay waa in uu jiro heerka cashuurta ugu fiican (marka la eego dakhliga gobolka), dood yar. Su'aasha muhiimka ah ayaa ah waa maxay boqolleydaas ugu fiican, taasoo laga yaabo inay ku kala duwanaato dhaqaale ilaa mid kale iyo xaaladda dhaqaale ee sare.
Marka la soo koobo, macluumaadka yar ee tusaaluhu ka kooban yahay (malo-awaal sax ah oo ku saabsan xaqiiqada) waa yaraanta faa'iidada ay leedahay.
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 saacada 13:XNUMX
Tani waa dhaleeceynta ugu liidata. Xitaa maaha mid run ah, sababtoo ah waxay u badan tahay inay haysato hal kaliya oo ugu badnaan, iyo goob kasta waxay ugu yaraan caddaynaysaa in aan daruuri ahayn kordhinta canshuurtu kordhinayso dakhliga. Tani waa doodda ugu weyn.
Sidoo kale run ahaantii kuma raacsani in macluumaad yar ay waxtar yar tahay. Halkan sidoo kale waxaa jira hannaan aad u adag oo leh si wanaagsan.
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 saacada 29:XNUMX
Wali ma fakarin, laakiin hal odhaah ayaa ishaydu qabatay. Waxaad ku qortay fikradaada marka aysan jirin wax macluumaad ah oo ku saabsan habka qaybinta markaa suurtagal maaha in xitaa laga hadlo macquulnimada. Isagoo ka hadlaya waxa aad ku sheegtay dhamaadka isbarbardhigga doodaha ku saabsan Gd iyo abuurista, mawduuca caddaynta goonida ah ee nidaamka sharciga waxaan u maleeyay inaad sheegatay in gaarnimada la sheegan karo iyada oo aan wax macluumaad ah laga helin habka qaybinta. Waa maxay farqiga u dhexeeya?
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 saacada 44:XNUMX
Marka habkaas oo aan nala garaneyn haba yaraatee, balse ay jiraan hab-raac, ma jirto in loo qaato in wax-qeybsigu isku mid yahay. Sidaan uga faallooday, tani waa ugu badnaan qalad aanan wax badan ku dhisi doonin. Laakiin aragtida fiqi ahaaneed ee fiqi ahaaneed waxaa jira malo ah in samaynta dunidu ay tahay kiis dhammaystiran oo ka yimid waxba kama jiraan (haddii kale su'aashu waxay ahaan doontaa waxa abuuray wixii hore). Xaaladdan oo kale malo ah in qaybinta labbiska ay tahay tan ugu macquulsan oo macquul ah. Qaybinta aan sinnayn waxay u baahan tahay sabab. Bakhtiyaanasiibka nafta, ha ahaado mid Eebbe sameeyey ama ha ahaado mid kale sabab baa jirta, waana in la ogaadaa sababtaas in wax laga sheego.
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 saacada 56:XNUMX
Waan dhibsanahay laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan wax yar ka sii xaabo. Way igu adag tahay in aan kala saaro wax-qaybsiga lebbiska ah iyo wax-qaybsiga aan sinnayn, balse anigu intaas ayaan kaga baxayaa (maxaa yeelay waa fikrad u baahan in laga fiirsado) oo aan si kale u weydiiyo – oo aad mooddo qaybin lebbisan (ku habboon tixgalinta summaynta). aad ayuu uga khaassan yahay qaybinta aan labbiska ahayn.
Intaa waxaa dheer, oo waxaan rajeynayaa inaanan khaldanayn oo aan carqaladayn, oo u muuqda arrinta inta badan mamnuucida in ay jiraan hababka qalabka.
H. Bayer 08 - 05/2022/16 saacada 53:XNUMX
dhab ahaan. Sidaa darteed qaybin isku mid ah ayaa loo malaynayaa maqnaanshaha macluumaad kale. Waa tan ugu fudud uguna siman.
Xalaqada ku jirta xaaraanta, kiis kastaa wuxuu ku taagan yahay mudnaantiisa. Laakiin waxaa jira mid ma socdo oo kaliya ka dib marka la eego tirakoobka laakiin ka dib xeerarka sharci-xalakh (tusaale ku dadaal fududaanta. Waxaa jira mabaadi'da-sharciga ah ee saameeya, iwm.).
H. Bayer 08 - 05/2022/18 saacada 53:XNUMX
Haddii ay tahay tan ugu fudud oo ugu simmetrical ah markaas waa tan ugu gaar ah, haddana? Nolol-maalmeedka iwm.
H. Bayer 08 - 05/2022/20 saacada 30:XNUMX
Ma dubno qaybinta. Qaybinta ayaa gacanta ku haysa bakhtiyaanasiibka. Qaybinta labbiska ayaa ah tan ugu fudud oo sidaas awgeed loo maleeyo. Sida in dhibco lagu tolo xariiq toosan ay uga wanaagsan tahay in lagu tolo sinaha, inkastoo aad dhihi karto xariiqda toosan waa tan ugu fudud, sidaas darteedna ugu gaar ah.
H. Bayer 08 - 05/2022/21 saacada 40:XNUMX
Waxa aad mooddaa in aad ka timid meel aad toos uga timi, waayo waxa aad arkaysaa in uu jiro khad fudud oo gaar ah oo tola qiyaas ahaan waxa markaa jira markaa waxa ay u badan tahay in aanay taasi dhicin. Laakin marka hore uma qaadan karno in arrin gaar ahi ay ku dhici doonto xariiq toosan iyada oo aan la isku xidhin. Waxaan fahamsanahay inaad leedahay tixgalinta fudud ayaa gebi ahaanba mudnaanta leh, laakiin sidee buu xariiqdu u tusinaysaa taas.
( Waxaan ka fikiray ka hor faaladii hore ee bakhtiyaanasiibka qaybinta mana helin welina waan yaabanahay)
H. Bayer 09 - 05/2022/07 saacada 38:XNUMX
Runtii ma fahmin waxa dooda ku saabsan tahay. Miyaad diidan tahay in maqnaanshaha macluumaadka kale ay suurtogal tahay in qaybinta lebbiska ah? Waa maxay sababta farqiga u dhexeeya natiijooyinka? Haddii qofku aanu garanayn kala duwanaanshaha u dhexeeya natiijooyinka booska muunada waxay u badan tahay inay dhammaantood leeyihiin miisaan isku mid ah. Ma garanayo waxaan ku daro.
H. Bayer 09 - 05/2022/09 saacada 48:XNUMX
Laakiin waxaad tahay fikradda ah in xitaa maqnaanshaha macluumaadka aysan u badneyn in la helo qaybinta isku midka ah ee nafaha. Oo waxaad sharaxday in ay tahay sababtoo ah waxaa jira hannaan aan la garanayn, oo kaliya marka ay soo baxdo kuwa aan dhammayn, nidaamyada sharciyada ayaa loo maleynayay in ay ka soo baxaan qaybinta isku midka ah sidaas darteedna gaarka ah ee nidaamka ayaa leh caddaynta abuurista.
Wali ma haysto fikrad adag, waxaana laga yaabaa inay jiraan farqi u dhexeeya dhacdooyinka ka hor (in haddii qofku xisaabiyo rajada laga yaabo inuu qaato qaybinta lebiska) iyo ka dib markii ay dhacday (ka dibna aad bay u adagtahay in si daacad ah loo qaato in ay tahay waxay ku dhaceen qaybinta dirayska). Oo MM habkaaga ayaan ku waydiiyey iyo hadday daalan tahay.
H. Bayer 09 - 05/2022/12 saacada 32:XNUMX
dhab ahaan. Waxaana u sharxay kala qaybinta. Inta ay socoto kiisas qaybintu waa isku mid. Habka xulashada ma jirto sabab loo qaato si sax ah taas. Oo waxaan ku daray in laga yaabo in tani ay tahay waxa aan u qaadan lahaa xog la'aan, laakiin waxba ka dhisi maayo.
Waxay iila muuqataa in aanu daalnay.
H. Bayer 09 - 05/2022/12 saacada 54:XNUMX
Kaliya ma ii caddayn kartaa haddii aan si sax ah u fahmay in caddaynta aan waxba ahayn (malaha inay suurtogal tahay, caddaynta Petah Tikva oo ka madaxbannaan cosmology) waxaad si togan u sheeganayaan in ay jiri doonto qaybinta lebiska ah (tanina waa sheegashada muhiimka ah ee caddaynta), ma aha oo kaliya mala-awaal aqoon la'aan.
H. Bayer 09 - 05/2022/13 saacada 38:XNUMX
Haa Hadday meelna ka iman waa in loola dhaqmaa sidii qaybin isku mid ah.
Garqaadkii u dambeeyay
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 saacada 30:XNUMX
Haddii malo-awaalku yahay in aynaan ahayn kuwo gaar ah, markaa wax macno ah ma laha in waxa nagu dhaca ay dhacaan markii ugu horeysay ama dhawaan, iyada oo suurtogalnimada 50% ama suurtogalnimada 1 trillion, marka loo eego xeerarka tirakoobka ama liddi ku ah. iyaga. Dhammaan kuwan waxba isma beddelaan. Ka dib oo dhan, ma nihin gaar ah.
Markaa doodaas oo dhan waa mid aan loo baahnayn.
Muxaadaro xikmado ah - Beer Hagola
Waan sameeyaa Daaran Jawaabta isku darka shishku waa khalad in ay kosher u tahay Rambam
Tirgits Daaran Kajawaab muxaadarooyinka xikmadaha - Beer Hagola
Awoodda salaadda ee uurjiifka Daaran Iran ma halkan? Ku saabsan Horumarka iyo Liberalism-ka Sane (Column 483)
Iyo tixraac dheeraad ah Daaran Iran ma halkan? Ku saabsan Horumarka iyo Liberalism-ka Sane (Column 483)